मुलुकको पहिलो महिला सीडीओ भन्छिन्– ‘पार्टीवालामा परिवर्तनको उन्माद थियो’ - अचानक - नेपाल
मुलुकको पहिलो महिला सीडीओ भन्छिन्– ‘पार्टीवालामा परिवर्तनको उन्माद थियो’
महोत्तरीमा जन्मिएकी उषा नेपालको परिचयको खातामा मुलुकको पहिलो महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सुरक्षित छ । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको रापतापमा उनी भक्तपुरमा सीडीओ बनिन् । ०२७ मा प्राध्यापनबाट सरकारी सेवामा पसेकी नेपाल ०३३ मा निजामती सेवामा छिरिन् । आफ्ना जागिरे अनुभवसहितको आत्मकथालाई उनले हालै पुस्तकाकार दिएकी छिन्, पहिलो महिला सीडीओ नाम दिएर । यसै सन्दर्भमा उनीसँग गरिएको कुराकानी :
पहिलो महिला सीडीओको अनुभव कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
भर्खरभर्खर प्रजातन्त्र आएको थियो । ०४७ मा म सीडीओ बनेँ । पार्टीवालामा परिवर्तनको उन्माद थियो । हामी त पञ्चायतकालका जागिरे भयौँ । उनीहरु प्रशासनलाई थर्काउने गर्थे । आफूले भनेका कुरा खुरुक्क गरिदिओस् भन्ठान्थे ।
कस्ता कुरामा थर्काउँथे ?
राती १२/१ बजे पनि उनीहरुले भनेका काम गरिदिओस् भन्ने मनसाय राख्थे । फोन गर्थे ।
पञ्चायतकालीन कर्मचारी भनेर नै त्यस्तो गरेका हुन् ?
त्यति मात्र होइन । महिला भनेर हेपेका होलान्जस्तो लाग्छ । किनभने, मैले अन्यत्र जिल्लाका पुरुष साथीहरुसँग कुराकानी गर्दा पार्टीवालाले अलिअलि दबाब दिन्छन् भन्थे । तर, थर्काउँदैन थिए रे ।
त्यो त पार्टी कार्यकर्ताको प्रतिक्रिया भयो । महिला सीडीओ हुँदा सामान्यजनको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?
भक्तपुरपछि मेरो बाँके सरुवा भयो । त्यहाँ मुस्लिम र पहाडतिरबाट झरेका ठकुरी समुदायको संख्या ठूलो थियो । यी दुवै समुदायमा स्वास्नी मानिसलाई दबाएर राख्ने चलन थियो । त्यसलाई म विरोध गर्थें । उनीहरु मलाई थर्काउँथे । ठकुरीहरु कार्यालय आए भन्नासाथै भेट्नुपर्ने । नत्र कराउने । पुरुषले भनेको महिलाले किन मान्न नहुने भन्ने ढंगका कुरा गर्थे । तर, म दबिनँ ।
सीडीओ हुँदाको सम्झनालायक घटना कुनै छ ?
मलाई सबै सम्झनै मन लाग्छ । तर, सोलुखुम्बुमा बलबहादुर केसीहरुसँग ठ्याक नमिलेको खुब सम्झिन्छु । उनी पार्टीको मानिसले भनेपछि किन नमान्ने भनेर नाना थरीका कुरा लिएर आउँथे । म कानुनअनुसार मात्रै काम गर्न खोज्थेँ । यस्तो मानिससँग काम गर्नुभन्दा त सरुवा हुनु राम्रो भनेर त्यहाँबाट हिँडे ।
पुस्तक लेख्ने प्रेरणा कसरी मिल्यो ?
लेखौँ कि नलेखौँ भन्ने दोधारमा थिएँ । कसैले पढ्दैनन्, लेखेर के गर्नु भनेर मन मारिसकेकी थिएँ । तर, नरेन्द्र शर्मा (स्वर्गीय) ले लेख्न प्रेरित गर्नुभयो । त्यो जमानामा महिला भएर सीडीओ चलाउनु चानचुने थिएन । महिलालाई जागरुक बनाउने मेरो अनुभव कामलाग्दो हुन्छ भनेर उहाँले लेख्न प्रोत्साहन गर्नुभयो ।
पुस्तकको उल्लेखनीय पक्ष के हो ?
लेखकको रुपमा मैले एउटा कुरो देखाउन खोजेकी छु । त्यो हो, समाजमा लिंगभेद हुन सक्दैन । दलगत भागबन्डा हुन सक्दैन । कर्मचारी एउटाको पालामा नियुक्त हुन्छ, अर्कोको पालामा बढुवाको सिफारिस भएको हुन्छ । त्यसलाई नै यो दल वा अर्को दलको भन्ठान्नु ठीक होइन ।